Milina Famakiana voalohany
Afaka mihaino sy mamaky ny lahatsoratra ny zanakao ary koa afaka mitahiry amin’ny oronan-peo.
Omena torolalana i voadika izy, afaka manampy azy ianao.
Ny fanontaniana mifandraika amin’ny lahatsoratra dia adika ihany koa. Izany dia ahafahanao mifampiresaka amin’ny zanakao amin’ny fiteny izay mahavantana anao indrindra.
Ireo fifanakalozana ireo dia manampy ny zanakao hahita ny valiny ary mahatakatra ny lahatsoratra.
Azonao atao koa ny mametraka fanontaniana hahafahana miresaka lohahevitra hafa mifandray amin’ireo lahatsoratra.
Ohatra ny lahatsoratra momba ny koala dia fomba iray hifanankalozana amin’ny zanakao momba ny biby, ireo izay tiany, ireo izay efa fantany, ny sakafo fihinany, ny toerana fonenany, sns…
<strong>Fampiasana ny Milina Famakiana voalohany</strong>
Mba hahazoana mamaky teny am-bava tsy misy kianina dia tena ilaina ny mahatakatra ny rindran-teny henoina. Noho izany dia azonao atao ny mihaino ny zanakao ary manontany azy izay nianarany raha mazava taminy ny zavatra reny.
Dingana voalohany. (1)
Rehefa sokafana ny application, dia misy tantara maro atolotra . Fidio ny tantara dia tsindriony bokotra.
Dingana faha roa. (2)
Angatahina ianao hisafidy ny haavon’ny fahasarotan’ny asa tokony hatao. Ny haavo1 no mora indrindra, ny haavo3 no tena sarotra. (Azo hatao ny miova ny ambaratonga amin’ny fotoana rehetra aorian’izay.)
Rehefa vita izany, tsindrio ny zanatsipika hanohizana.
Dingana faha telo. (3)
Mihaino ny fiandoahan’ny tantara ny zanakao. Tsy misy rindran-teny na iray miseho afa tsy sary iray fotsiny, mba ahafahana mifantoka tsara amin’ny fihainoana. Amin’izay fotoana izay dia mety mahaliana anao fa mihaino miaraka aminy ianao ary manontany azy ny zavatra azony, mialoha ny hanohizana ny dingana manaraka.
Dingana faha efatra. (4)
Angatahana ianao hamaky ny fehezanteny natolotra sy hitahiry izany (tsindrio ny bokotra manga). Raha toa ka sarotra na mora loatra ilay fehezanteny , ny bokotra « niveau » dia ahafahanao manova ny haavon’ny fahasarotana. Ilay ankizy dia afaka mizatra mamaky ny fehezanteny mialohan’ny hitehirizana azy na mandefa mivantana amin’ny firaketana.
Rehefa voavaky ny tehezanteny dia tsindrio ny «STOP ».
Dingana faha dimy. (5)
Asaina mihaino izay voarakitra ny zaza (bokotra volom-boasary).
Afaka mitahiry ny fehezanteny indray ny zaza (bokotra manga miara amin’ny « micrô »).
Fanovana ny haavony (bokotra maitso).
Mankanesa amin’ny dingana manaraka(bokotra manga miaraka amin’ny zanatsipika mpanondro fotsy).
Ireo dingana manaraka.
Avereno ny dingana faha telo (3) ka hatramin’ny faha dimy (5) rehefa avy eo dia enoy ny faran’ny tantara.
Fihainoana sy/na fitazonana an-tsoratra.
Asaina mihaino ny tantara voatahiry manontolo indray ny zaza . Anankiroa ny alaolana :
Mihaino mivantana ny tantara ny zaza. Asaina tsindriny ny sary misy ankizy mamaky teny. Avy eo, dia afaka mitahiry izany ao anaty takelaka indray izy rehefa avy manindry ny bokotra manga na miala ao amin’ny « application » raha tsy te hitahiry ny tantarana izy.
Tehirizin’ilay za amin’ny horonampeo ny tantara aloha an’izany mialoha ny henohiny azy mba hiterizany azy. Asaina tsindriany ny zanatsipika. Asiany ny fanampinanarany. Voatahiry ao anaty takelaka ny tantara. Ho hitany ery amin’ny ilany ambony havanana ao amin’ny pejy fanolorana ‘ny « application » ao anatiny « histoires enregistrées » , afaka henoiny araka izay tiavany azy.
Ny tanatara mitovy amin’izany dia azo tehirizina an-tsoratra imbetsaka arakaraka ny haavon’ny fahasarotany.
01. L’épouvantail voyageur (malagasy)
02. Le rêve vendu (malagasy)
Namidy ilay nofy
03. Accusée, levez-vous ! (malagasy)
Voampanga, mitsangana !
04. Aventures au sommet d’un arbre (malagasy)
Kitoatoa teny an-tampon-kazo
05. Le koala (malagasy)
06. Le lièvre et la Grand Génie de la brousse (malagasy)
Rabitro sy ny Jina ao anaty ala
07. Les singes et la sécheresse (malagasy)
Ny rajako sy ny fahamainana
08. Monsieur Pou déménage (malagasy)
Mifindra toerana Ingahy Pou.(Hao)
09. Pitane ne s’aime pas (malagasy)
Tsy tia ny tenany i Pitane
10. La tour Eiffel (malagasy)
NY TOUR EIFFEL
11. Jardine en t’amusant (malagasy)
Miasà tany amim-pahafinaretana
12. L’escargot (malagasy)
13. Les haricots verts de Timéo (malagasy)
Ny tsaramaso tanoran’i Timéo
14. Sara a toujours une solution (malagasy)
Manana vahaolana foana i Sara
Fampiasana ny MILINA FAMAKIANA VOALOHANY
© 2021 Milina Famakiana